Wararkii ugu dambeeyay |
Horumarka Hadda ee Warshadaha Caaryada Furniture
Iyadoo horumarka joogtada ah ee warshadaha caaryada Shiinaha ee Furniture, baahida iyo baahida loo qabo alaabta caaryada alaabta guriga si tartiib tartiib ah u kordhaya. Kobocani wuxuu u horseeday dhiirigelin weyn kobcinta tikniyoolajiyadda warshadaha. Mustaqbalka horumarka warshadaha, hudheelka tikniyoolajiyadda ...
Sida Loo Sameeyo Qaab Qafilan oo Hawo ah oo Tayo Sare leh
1. Qaabeynta naqshadeynta iyo soo saarista mid kasta oo Qaab Hawo Qaboojiye ah waa in lagu soo koobaa waqtiga: iyadoo loo marayo koontaroolka wax ku oolka ah ee aqoon isweydaarsiga, si wax ku ool ah u xakameynaya xoqitaanka amarka shaqada, iyadoo loo marayo qaab dhismeedka qaab-dhismeedka saxda ah, qaab-dhismeedka qaybta caaryada ee hufan iyo qaybaha eber ee saxda ah. kormeerka, ...
Heerkulka Aad U Hooseeya ee Qaab dhismeedka Dustbin wuxuu sababi karaa cilladaha dusha sare
Xitaa marka dhalaalku soo galo Moodhiyaha Dustbin, xawaaraha duritaanka ayaa ah mid joogto ah oo heerka socodka uu isbeddelo. Qulqulka socodka dhalaalku wuu sarreeyaa marka la galayo aagga sanduuqa mareenka, laakiin qulqulka socodka dhalaalku wuxuu bilaabmayaa inuu yaraado ka dib markii uu soo galay godka caaryada, ie, marxaladda buuxinta caaryada boodhka. Kala duwanaanshaha t ...
Sida Si Sax ah Looga Qabto Maqaarka Mashiinka Mashiinka Oogada
Dhibco madow waxay u muuqdaan oo keliya furitaanka Qaab-dhismeedka Kursiga, laakiin sidoo kale inta badan ka dib marka geesaha fiiqan ee maqaalka la sameeyo. Tusaale ahaan, dusha koonaha fiiqan ee shay badanaa waa mid aad u siman, laakiin aad u cawlan oo qallafsan gadaashiisa. Tani waxay sidoo kale sabab u tahay qulqulka qulqulka xad-dhaafka ah iyo cirbadda la isku duro ...
Naqshadaynta Qaab-hawleedka Hawo-qaboojiyaha Ayaa Go'aaminaya Jaanqaadka Warping
Asal ahaan, naqshadeynta Moldka Hawo-qaboojiyaha ayaa go'aamisa u janjeera in la duubo. Way adag tahay in la xakameeyo isbeddelladan adoo beddelaya xaaladaha waxqabadka. Ugu dambeyntiina, dhibaatada waa in laga xalliyaa naqshadeynta iyo hagaajinta caaryada qaboojiyaha hawada. Dhacdadan badanaa waxaa sababa soo socda ...
Iyadoo loo marayo Tijaabinta joogtada ah ee lagu xukumayo Tayada Qaab dhismeedka Dustbin
Wixii Dustbin Mold, qodobbada ugu muhiimsan waa asymmetry (nolosha caaryada iyo tayada baaldiga muddada-dheer) iyo waxqabadka xiritaanka (tayada xumbo), sidaa darteed qalabka wax-qabadka sare ayaa loo baahan yahay. Mid ka mid ah geeddi-socodka muhiimka ah waa xakamaynta tayada, taas oo fiicnaan laheyd haddii alaab-qeybiyaha uu lahaa tayada tayada oo dhameystiran ...
U Samee Habka Waxsoosaar Wanaagsan ee Qaabab Maalin Walba u baahan
Sida loo abuuro nidaam wax soo saar qumman qayb qayb ka mid ah Guul-darrada Daily Necessities Mold waxay ku xiran tahay in badan oo ku saabsan saxsanaanta baahiyaha maalinlaha ah ee la isticmaalo. Waa aasaaska alaabooyin aan tiro lahayn. Saxsanaanta qaybaha ku jira baahiyaha maalinlaha ah ee ka soo baxa qaybaha caaryada, ...
KU SOO LAAB SHAQADA 2021
KU SOO LAABO SHAQADA 2021 Guga Shiinaha ayaa dhammaaday oo waxaan ku soo laabannay shaqadii! Ganacsiga aasaasiga ah ee Heya wuxuu diiradda saarayaa soo saarista wasakhda balaastigga ah oo leh in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah. Sida wasakhda reerka, wasakhda duritaanka maacuunta, qalabka caaryada qalabka guryaha, warshadaha iyo beeraha ...